Indawo yogcino-mpepha eyiNasdaq eyi-100
Udidi: I-Nasdaq 100
I-Nasdaq100 (NAS100) Iphinda Iqalise i-Uptrend, Iphinde Ibuyele kwiNgingqi eBotyiswe kakhulu
I-NAS100 ibikwi-uptrend. Isalathiso sibuyele emva kokufikelela kwinqanaba eliphezulu le-16469. Ukunyuka okuphezulu kuqale kwakhona emva kokubuyisela. Ukubuyiswa kwangoku kubangelwa yimeko yokuthengwa ngokugqithiseleyo kwesalathisi. Okwangoku, ngoNovemba 8 uptrend, i-candle body retraceed yavavanya i-78.6% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyiswa kwakhona kubonisa ukuba i-NAS 100 iya kunyuka kodwa iya kubuya umva kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension.
Isalathiso sikwinqanaba le-66 le-Relative Strength kwixesha le-14. Isalathiso sikwi-bullish trend kwaye siyakwazi ukunyuka phezulu. I-SMA yeentsuku ze-50 kunye ne-21-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka. Ixabiso lesalathisi lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo emva kokubuyisela. Ukunyuka ukuya phezulu kunokwenzeka
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-NAS100 ikwintshukumo esezantsi. Isalathiso sawela kwinqanaba le-16020 kwaye saphinda sahlanganisana ngaphezu kwayo. Namhlanje, ixabiso lesalathiso libuyele ngaphezulu kwenkxaso yangoku ukuqalisa kwakhona i-uptrend. Imarike iya kunyuka njengoko ixabiso lekhefu lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo.
I-NAS100- 4 Itshathi yeYure
I-NAS100 iphinde yaqala ukuya phezulu emva kokubuyiselwa okuncinci. Nangona kunjalo, isalathisi ngoku sirhweba kwaye sisondela kummandla othengisiweyo wemarike. Abathengisi banokuthi bavele banyuse amaxabiso ezantsi. .